Gretech Online Movie Player ama ciyaaryahan GOM waa mid ka mid ah kuwa barnaamijyada lagu soo diyaariyay si ay u geedi socodka video xiriira fudud oo siman. Ka dib markii qaar ka mid ah aragtida ah in lagu baahiyay internetka ee la xiriirta in ciyaaryahankaan. Labada dhinaca ee ciyaaryahanka ayaa lagu daray si loo hubiyo in akhristayaasha ku siin karaa isku day ah oo ku salaysan fursadaha sida hoos.
Gretech ayaa caan ku ah shaqada ugu samaysay oo duurka ku of technology iyo ciyaaryahanka GOM sidoo kale waa mid ka mid ah soo bandhigidooda. Gretech isagoo urur ah oo caan ah marnaba u dhimeysa tayada iyo sidaas darteed waxaa lagula talinayaa dhammaan dadka isticmaala si ay u siiyaan GOM ciyaaryahanka kubad. Intro ee shirkadda ayaa soo bandhigay si loo xaqiijiyo in dadka isticmaala si fiican u yaqaanna ku saabsan taariikhda ciyaaryahanka noqdaan, sida loo isticmaali karo, sida in ay ka faa'iidaystaan ​​ka buuxaan functionalities kuwa waxaana lagu soo gudahood. Odoroska Great iyo design oo quruxsan waa waxa ay ka dhigeysaa ilaa ciyaaryahan GOM hab lagu taageerayo dadka isticmaala ee buuxa.
Part1: dib u eegista Good ciyaaryahan GOM
Part2: dib u eegista xun ee ciyaaryahan GOM
Part3: Top 5 kale oo ciyaaryahan GOM daaqado
Part4: Top 5 kale oo ciyaaryahan GOM u Mac
(1) Top 5 dib u eegista goobta warbaahinta
Ka dib waxaa ku qoran liis ah ee dib u eegista in lagu posted by warbaahinta goobood oo kala duwan oo dhan internet-ka.
Posted by: PC-taliyaha
Content: dib u eegis ku xusan in user ka ciyaara kartaa wax kasta oo ku dhowaad video file maqal ah oo la isticmaalayo ciyaaryahankaan oo waxaa haboon duuban oo u qalmaa isku day ah.
URL Review: http://www.pcadvisor.co.uk/review/multimedia-software/gom-media-player-21435119-review-3407071/
Content: dib u eegista Tani waxay sidoo kale waa heer sare wanaagsan iyo waxa uu sheegayaa in ciyaaryahankaan ka ciyaari kara ku dhowaad file kasta oo fudayd iyo qanacsanaanta isticmaalaha.
URL Review: http://www.techhive.com/article/2012996/review-gom-media-player-plays-just-about-anything.html
Content: dib u eegista waxa uu dhigayaa in ciyaaryahanka GOM waa ciyaaryahanka ugu muhiim oo lacag la'aan ah in user a yeelan karaan arrintan la xiriira sidii ay hubineysaa in ku dhawaad ​​qaab waxaa la ciyaaray fudayd iyo qanacsanaanta.
URL Review: http://www.techsupportalert.com/best-free-windows-media-player-replacement.htm
Content: dib u eegis ah in la soo geliyey tahay mid ka mid ah goobaha casriga ah ugu caan dunida iyo waxa uu sheegayaa in ciyaaryahanka GOM waa barnaamij u ogolaanaya ciyaaro file kasta oo aan wax laga badalay loo baahan yahay.
Content: Boggan waxa uu qoray in dhisay codes sameeyo suurta user si aad u hesho natiijooyinka laga cabsado marka ay timaado soo gudbin arrin la xidhiidha ee. Codec ayaa sida OGG ciyaaraa dhamaan faylasha fudayd.
URL Review: http://filehippo.com/download_gom_player/
(2) Top 5 dib u eegista ka users
Hoos waxaa ku qoran ugu sareysa 5 dib u eegista in ay tahay in la tixgeliyo marka ay timaado waayo-aragnimo user arrintan la xiriira.
Content: dib u eegis ayaa lagu posted by JASONG222 user oo u sheegay in ay ka shaqeynayaan ee ciyaaryahan uu yahay ma la jeclaysto oo keliya, laakiin waxa ay sidoo kale hubineysaa in user helo natiijada cabsi badan.
URL Review: http://gom-player.en.softonic.com/opinion/love-it-favorite-player-438062
Content: user ayaa posted dib u eegista ay tahay mid Stuart oo uu sheegay in inkastoo ciyaaryahanka uu yahay mid yara danbayso iyo samaynta PC gaabis ah, laakiin weli waa mid ka mid ah ciyaartoyda kaliya taas oo dhan qaabab ah.
Content: Qaybta comment ciyaaryahanka dhigayaa dib u eegis ah oo uu soo posted by Sala user wuxuu Ka mid yahay aragtida ah in barnaamijka uu yahay mid unsurpassed iyo rating in la bixiyo arrintan la xiriira waa 5/5 taasoo si fudud u weyn.
URL Review: http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Video/Video-Players/Gom-Player.shtml
Content: user waa eegista in barnaamijka uu yahay mid fudud in la isticmaalo iyo sidoo kale loogu badalo karaa qaabab badan waqti isku mid ah oo ay u heer sare ah ayaa lagu talinayaa in arrintan la xiriira.
URL Review: https://2ad7-downloads.phpnuke.org/en/c53966/gom-player
Posted by: codes Free
Content: user waa Mickey2OZ isna waa eegista in ciyaaryahanka la maalin kasta marayay waxaa soo koraya terminologies cusub si loo hubiyo in wixii kaloo ayaa la siiyey oo aan arin kasta.
URL Review: http://www.free-codecs.com/gom_player_reviews.htm
Hoos waxaa ku qoran ugu sareysa 5 dib u eegista posted by websites casriga ah in ay yihiin kuwo aan wanaagsan
Content: Goobta waa eegista in xiriir download website-ka rasmiga ah ee ciyaaryahanka uusan ka shaqeeyaan iyo marka labaad aan la updated si joogto ah oo aan calaamad wanaagsan
URL Review: http://www.softpedia.com/reviews/windows/Gom-Player-28789.shtml
Content: Goobta waa aragtida ah in uu birta ku raadinta Google Timid rakibo waa con ugu weyn ee arrintan la xiriira iyo muuqaalada yar ayaa sidoo kale ka maqan arrintan la xiriira.
URL Review: http://gom-player.en.softonic.com/
Posted by: rugta Tech
Content: Dib u eegista uu soo posted by mid ka mid ah tifaftirayaasha ee goobta ie Liane Cassavoy dhigayaa in tayada video loo maqli karo ee GOM ma aha ilaa ay calaamaddu ku taal, oo waa con ugu weyn ee ciyaaryahan oo user uu leeyahay inuu qaado.
Content: dib u eegista Tani ayaa tilmaamay xaqiiqada ah in taageero macaamiisha barnaamijka ee ma aha ilaa ay calaamaddu ku taal, oo waa marnaba in lagu xiro. Tallaabooyin dheeraad ah ayaa sidoo kale waxaa halka rakibo la sameeyo.
Content: Boggan ayaa sidoo kale dib u eegay ciyaaryahan GOM sida mid ka mid ah fursadaha ugu mashquulsan oo jid uma u user ay u uninstall birta ku Search Google. Sidoo kale waa xaqiiqada ah in ciyaaryahanka ku xayiran garoonka jeer.
Ka dib waa u eegista negative shaqsi posted by users on goobood oo kala duwan.
Content: user ayaa posted dib u eegista ay tahay mid StMark oo uu sheegay in ciyaaryahanka GOM waa software ah aadka u halista ah in rakibtay spyware oo dhan ma fududaan. Barnaamijkan waxaa loo ahayn in la soo bixi at dhan.
URL Review: http://gom-player.en.softonic.com/opinion/dangerous-software-480354
Content: Magaca adeegsadaha waa Myself123456789 oo uu sheegay in barnaamijka uu yahay lousy iyo tan waxaa ka dhan laguma talinayo sidii ay caanuhu PC iyo sidoo kale dar ah ee barnaamijyada in ay khatar ku tahay PC.
URL Review: http://gom-player.en.softonic.com/opinion/lousy-software-installs-software-not-requested-448617
Content: user waa reverbfreak iyo sida tan user barnaamijka si xoog ah ku rakibtay toolbar in iska leh Avg iyo wuxuu helay fursad u lahayn in ay ka baxdo inta lagu guda jiro rakibo
URL Review: http://www.freewarefiles.com/review_6_74_21376.html
Content: username waa muscleheat wuxuu Ka mid yahay aragtida ah in barnaamijka uu yahay mid qashinka sida badala goobaha goobidda iyo badala homepage adigoonan fasax.
Dib u eegid ugu danbeysay ee waa sida soo socota:
Content: user waa ka mid ah aragtida ah in ciyaaryahan inuu xaqiijiyo in processor la daahisay by Dushiinna culaab dheeraad ah oo aan loo baahnayn waana mid ka mid ah ciyaartoyda u ogolaanaya in PC si loo yareeyo hoos.
URL Review: http://gom-player.soft32.com/
Ka dib waa 5 kale oo hogaanka ciyaaryahanka GOM marka ay timaado OS daaqadaha.
Ciyaaryahanka 1. warbaahinta VLC
Barnaamijku waxa uu ka ciyaari karaa qaab kasta oo user u baahan tahay. Waxay leedahay xulashada weyn oo qaabab uu ka soo xusho.
Ciyaaryahanka waa xor ah oo si sahlan loo isticmaali oo ay jiraan shirar badan oo ah in la taageero lagu ciyaaryahanka.
Ciyaaryahanka 2. KM
Ciyaaryahanka ayaa interface fudud oo sidaas daraaddeed user n sameeyo lawada isticmaalo functionalities ku fudayd.
Wax soo saarka, haddii ciyaaryahanka waa mid tayo HD iyo technology 4K ayaa sidoo kale lagu gundhig ugu yahay nooca ugu dambeeya.
Ciyaaryahanka ayaa ku soo beegmay iyadoo dhisay pack suntan sidaa darteed waxaa jirta taageero aad u weyn in qaab sugayo user.
Muuqashada guud ee ciyaaryahanka waa xirfad iyo adeegsiga Sidaa darteed waa u fududahay si ay u fuliyaan.
4. M ciyaaryahan
Kooxda ciyaaryahan M
Ciyaaryahanka waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan oo ay hayaan. The soo noqnoqda updates waxaa ka mid ah ciyaartoyda ugu of jeer oo dhan.
Muuqashada guud ee ciyaaryahanka waa u fududahay in la fahmo iyo interface la shaqeyn karaan by user a laylis sidoo
Ciyaaryahanka ayaa waxaa loo qoondeeyey ku dadaalay in la sameeyo fudud ee ka shaqeynayaan guud ahaan in ay raacaan.
Interface waa fududahay in la isticmaalo iyo in la fahmo iyo sabab la mid ah waxaa loo arkaa in ay ka users badan.
Ciyaaryahanka taageertaa kasta qaab oo gebi ahaanba user a bixin karaa qaab ah in loo baahan yahay.
Hoos waxaa ku qoran liiska ay tahay in la tixgeliyo in arrintan la xiriira.
Ciyaaryahanka 1. daydo Pot
Ciyaaryahanka waa fududahay in la isticmaalo iyo joogtaynta ay sabab u tahay taageerada ay bixiyaan ku dhiirigelinayaan in uu.
The soo noqnoqda updates waxaa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu weyn si ay u isticmaalaan sida codecs dambeeyay had iyo jeer waxaa jira si ay u taageeraan sameeyo.
2. ciyaaryahan A
Tani waa ciyaaryahanka ugu fudud liiska iyo interface waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican.
Ciyaaryahanka ayaa laga cabsado taageero macaamiisha waa ku dadaala si ay u xaliyaan arrimaha oo dhan.
Waxaa taageera in ka taageero ka Apple taas oo ka dhigaysa waa casriga ah mid aad u sarreeya liiskan.
Waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fahan ahaan mid ah warshadaha marka la eego taageerada file
Ciyaaryahanka waa il furan oo lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan iyo rakibi taas oo si sahlan loo isticmaali
Waxaa jira barnaamij oo dheeraad ah ku jirin in la is sabab u download file exe ka website ugu weyn.
5. M ciyaaryahan OSX kordhiyay
Mashruuca il Open
Ciyaaryahanka waa isha u furan waa ay fududahay in wax laga beddelo sida baahidaada. Sidaas daraaddeed horumarinta waa arrin ku jirin innaba.
Muuqashada ciyaaryahanka uu yahay mid aad xirfad iyo ilaa taariikhda waxa ka mid ah ciyaartoyda aan aadka u isticmaalno ee jeer oo dhan samaynta.
Ciyaaryahanka GOM waa kuwa isticmaala oo dhan, kuwaas oo ka daaleen ciyaartoyda kale iyo qaabka ciyaareed la xiriira. Waxaa labadaba wanaagsan iyo kuwa xun nidaamka ku xidhan tahay rabitaan user dhinaca nooca dib u eegista in lagu kor ku posted samayn karaa. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay ka fiirsan doorashooyinka in la siiyey si aad dooranayso ciyaaryahan marna waa arrin. Waxaa soo bixin doonaa natiijooyinka ugu fiican waqti waynay iyo dadka isticmaala Windows iyo OS Mac awood u yeelan doonaan in ay ku noolaadaan nabad marka ay timaado soo gudbin ciyaaraha. Waa fududahay in la rakibo ay OS kala Ciyaartoyda oo sidaas daraaddeed kuwanu waa kuwa la weyn lagu talinayaa in la isticmaalo sida ku xiran tahay ciyaaryahan default korkiisa doorashada user.
> Resource > Top List > Top 20 dib u eegista ciyaaryahan GOM iyo waxyaabaha kale ee